Izitulo ezenziwe imfashini 2015. Impela izitayela zemifashini yezemfashini zika-2015, isithombe. With ukuthi yini ukugqoka iziketi zemfashini 2015.
Kubonakala sengathi isiqubulo esithi "Konke okusha kudala okukhohliwe" kusanda kuba abaqambi befesimisi isimiso esiyinhloko ekwakheni amaqoqo amasha. Ngokuzijwayeza njalo kulezi zinsuku zibuyiselwe izinto zokugqoka eziye zaphakama ukuphakama, kodwa ngenxa yokuhlobisa okusha, ukusika kanye nesitayela kuthatha umoya wesibili futhi uphinde ubheke abesifazane abakulandela imidwebo yefashini. Lo mkhuba nawo wathinta iziketi zezimfashini, ezenziwa ngo-2015 ngokuyinhloko zimelelwe ngamamodeli nezitayela zangesikhathi esidlule.
Iziketi zezimfashini kunazo zonke 2015: izinhlobonhlobo zangempela nezitayela
Ngakho-ke, phakathi kwemikhuba eyinhloko ka-2015 - i-skirt-ipensela. Kanye nesigqoko esimhlophe nesigqoko esincane somnyama, isikhwama sepensela esingaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka siyizingubo zangempela zesigqoko sesifazane. Isizathu salokhu kuthandwa sisebusweni, esakhiwe ngesisekelo salesi simodeli. Izindebe ezincane, eziqinile, ingubo, inikeza umfanekiso wesifazane nowesifazane ngokobulili, kodwa hhayi ngokungahlambuluki, kodwa ngekhanda elibucayi lobuhle obuhle.
Ngo-2015, abaqambi abazange benze izidingo ezikhethekile ngobude bepensela nokuhlanganiswa kwalesi sitayela nezinye izinto. Ngakho-ke, ubude benguketi buyashintsha, kodwa ngesikhathi esifanayo uhlale ebangeni kusukela emadolweni kuya phakathi kwe-shin. Umthamo wehlobo olusihlwa ngo-2015 uzoba yimikhonto emincane emibala ye-pastel. Lolu hlelo lombala luye lwagcizelelwa ngokwengeziwe ngomfanekiso wesifazane. Lilac, pink, ithenda eluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi ophuzi, ukhilimu, i-mint - kunzima ukucabanga ngombala "obomvu" obengeziwe.
Ngo-2015, ukuvuna kanye ne-retro kuzoqinisa izikhundla zabo emhlabeni jikelele futhi kuzoba izitayela zangempela zezingubo zemfashini. Namanje zithandwa yiziketi eziyisiqhwa esiphezulu nesigcawu se-tulip. Kanye ne-skirt-tulip ukujabulisa izinhliziyo zabesifazane kuyoba ne-skirt-bell - enye okumele ibe nayo ngonyaka ka-2015. Futhi, phakathi kwezihlobo zangempela zonyaka ka-2015 kubalulekile ukuphawula i-skirt-bell lesikhumba. Kulo mkhuba futhi kukhonjiswe imodeli ye-skirt-bell, okuyinto ngenxa yobuningi bendwangu ephethe kahle isimo.
Esinye isitayela sangempela, esivela emasontweni angaphambilini - i-skirt-ibhulukwe. Okuthakazelisayo ngokukhethekile yizitayela ezinqamulelwe ezihlongozwa ngabadwebi phakathi kwamadolo. Iziketi ezingavamile ezihambisana nezindwangu ezingalindelekile nokubunjwa kubheka okungezona okuncane futhi okuhlelekile. Isibonelo esicacile - iziketi zemikhono zekhanda lesikhumba se-patent nesikhumba esinezinwele. Kanye nezitayela ezincishisiwe, le podium igcwele kokubili izinhlobo eziyisikhombisa ze-skirt-trousers ezinamacu amaningi nezinsimbi.
Ungalahlekelwa ukubaluleka kwawo ngo-2015 kanye nesketi nge-basque. Umkhuba uzoba: i-skirt encane ene-wavy Basque, ipensela yesiketi ye-classic ene-basque, namamodeli ane-basque ezinhlangothini.
Yini okufanele ugqoke umkhonto weziketi zonyaka ka-2015?
Umbuzo oyinhloko ovela kubaningi besifazane befashini: "Kungani kufanele ugqoke iziketi zezimfashini ngo-2015?". Sizozama ukumnikeza impendulo ephelele kakhulu.
Ngakho, isiketi sepensela sihlanganiswe kahle namagebengu, ama-blouses, ama-pullovers, ama-sweaters amancane. Abakhiqizi abaningi emaqoqweni abo basebenzise inhlanganisela enesibindi - isikhwama sepensela kanye nejackethi lesikhumba.
Izitshudeni zesitayela se-retro kanye nokuvuna ("bell", "tulip", "sun") ngo-2015 kungagcinwa ngokuphephile nge-slippers, izicathulo ezinezinwele ezincane noma izinwele zezinyawo. Izithombe ezisezingeni elihle ezisekelwe kulezi zithombe zitholakala ngokubambisana nama-checkered shirts, ama-blades amakhulu agcwalisiwe, futhi afinyelele izintambo, amajackethi namajack. Ukuhamba komfanekiso kungenziwa wanezela ngosizo lwe-topa-bustier noma i-corset ngaphandle kwamaglavu. Futhi uma uhamba ngemvelo noma uhambo lokuhlwa edolobheni, ungakwazi ukugqoka i-retro skirt kanye ne-T-shirt yezemidlalo noma i-T-shirt eqinile kumabhande amancane. Uma ukhetha umbala wengwe njengokuprinta kwesiketi sokuvuna, bese ubona umthamo wokulinganisela: kuqoqo kufanele kube khona into eyodwa ebambekayo. Ezinye izakhi zengubo kumele zibe yizikhohlisi futhi zilula ngangokunokwenzeka. Isibonelo, ukhetho lokuwina ukunqoba luyinhlanganisela yenguqulo yokuphrinta nge-black or beige top. Ungahlanganisi ingwe yokuphrinta nge-cage, izimbali, imivimbo, i-peas.
Isiketi esinebhasiki sihlanganiswe ngokugcwele nama-blame aqinile, amasaka ama-laconic, ama-blouses aseMelika, izicathulo ezinhle, ama-swiss avulekile. Kodwa okwenziwe nge-skirt-trousers kungcono ukhethe isitayela esifakwe esifakwe esitokisini, i-classic white blouse noma i-top top bustier - konke kuxhomeke esithombeni osungile.
Izingubo zomama olindelekile, abesifazane abakhulelwe
Indlela yokubukeka isitayela ezembatho ezilula: imithetho emihlanu ye-wardrobe kazhual kulabo abafuna ukungenakuvinjelwa!
Indlela yokufunda indlela yokugqoka intombazane efanele
Yimuphi uhlobo lwejaji eliphansi lokukhetha ingane?
Ukudla okunempilo kwabesifazane abakhulelwe
Isobho se-pea esiphundu esimangalisayo
Kungani abesifazane bezenza sengathi bafana ne-orgasm?
I-Horoscope yama-Scorpio-amadoda ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
Ukwelashwa kwamantombazane emntwaneni ngesisekelo sezinzwa
Ukusabela okwenziwe okwehliswayo kuyo yonke imifino nezithelo
Izintandokazi ze-Fortune phakathi kwezimpawu zodiacac ngoFebruwari 2018
Ukukhula kwezitshalo nezimbiwa eziwusizo
Amathiphu wezimo zengqondo indlela yokubhekana nezinkinga zokuphila ngendlela efanele
Umzimba omuhle futhi ohlotshiwe kahle
Umbala wezinwele ezisekhaya ekhaya
ULera Kudryavtseva utshele ngokuphila nge-maniac
Isitayela samanzi esingaphakathi
I-Heparin amafutha ngesikhathi sokukhulelwa
I-dessert yesimanje - ukupheka kwesigaba-by-stage